Updated: 2016-03-16 16:16
နာဂစခိ တူရကီ ထမင်း
အနောက် နိုင် ငံ ရဲ့ စား စရာ ဖြစ်တဲ့ ဒံပေါက် ၊ ပါစတာ ၊ အကြော် တို့ ပါ ၀င် တဲ့ အထွေထွေ အစုံ စားစရာ တစ်မျိုး ။ ဒီ ပုံ စံ က မူ တစ် မျိုး ဖြစ် ပြီး တော့ ၊ မြို့ တွင်းက စား သောက် ဆိုင် အသီးသီး မှာ...
Updated: 2016-03-16 15:41
အာစိုး ရေခဲ မုန့် ( aso soft cream)
အဘုရာမ ရွာ မှာ ပြုစု ထား တဲ့ ဆွစ်ဇလန် အညို ရောင် နွား နို့က နေ ထုတ် လုပ် ထား တဲ့ ရေ ခဲ မှုန့် က နူး နူး ညံ့ ညံ့ ရှိ တဲ့ အရသာ ရှိ ပြီး တော့ လက် ဆက် ပြီး စိမ့် နေတဲ့ အရ သာ နဲ့ပျော် ၀င် သွား ပါ လိမ့် မ...
Updated: 2016-03-16 15:34
နာမည် ကတော့ ရာ ဇ၀င် ရှိ ပြီး ၊ ပဲ ဂျယ် လီ လို့ ခေါ် တဲ့ ရာ ဇ၀င် ရှိပါတယ်။ သဘာဝ အာလူး နဲ့ ဆန် မှုန့် တို့ ကို ရော ပြီး အပူး ပေး ထား တဲ့ မုန့် တစ် မျိုး ဖြစ် ပြီး အစာ သွပ် ထား တဲ့ ခါရု ခန်း က လ...
Updated: 2016-01-08 10:56
ငါးရှဉ့် ပေါ များ တဲ့ ဂျ ပန် နိုင် ငံ နါ ပါတ် တစ် ခ ဂို ရှိ မ ခရိုင် ။ငါ့ ရှဉ့် ရဲ့ လျို့ ၀ှက် ချက် ကတော့ ရေ သန့် ရေ ကောင်း ၊ နွေ ထွေးတဲ့ ပတ် ၀န်း ကျင် ပြီး တော့ စား သောက် ဆိုင် တွေ က အပြိုင် အဆိုင်...
Updated: 2016-01-08 10:46
မြင်း သား စရှိ မိ
ခုမမို သို ရဲ့ ဒေသခံ အစား အစာ တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ခြေ ထား တဲ့ ကြက် သွန် နီ နဲ့ ဂျင်း ပြီး တော့ ကိုက် ထား တဲ့ ကြက် သွန် မိတ် ကို ထည့် ပြီး ငံ ပြာ ရည် နဲ့ တို့ စား ရပါ တယ်။မြင်း ရဲ့ ဆီ ကေ တာ့ အပူ ချိန် န...
Updated: 2016-01-08 09:53
တကန မဲ ရှိ ဒ ဂေါ ဂျိ ရု
ခု မမို တို ရဲ့ ဒေ သခံ အစား အစာ ဖြစ် တဲ့ ဒဂေါ ဂျိ ရု နဲ့ မုန့် ညှင်း စိမ်း ထမင်း ကို နှစ် မျိုး လုံး သုံး ဆောင် နိုင် ပါ တယ်။ဒဂေါ ဆို တာ ကတော့ ဂျုံ ဒဂေါ နဲ့ အိမ် မှာ ရဲ့ တဲ့ ဆန် မှုန့် နဲ့ လုံး ထား တဲ...